Izambatho zabafazi abakhulelweyo: ukhetho lokugqoka umfazi okhulelwe, iimpawu zokugqoka abafazi abakhulelweyo, ifoto
Umtshakazi okhulelweyo akayi kubangalisa kwihlabathi lanamhlanje. Ngethamsanqa, nokuba intombazana kwindawo ekhangayo inethuba lokujonga umtshato wakhe. Icandelo leMfashoni linikeza inani elikhulu lemifanekiso kunye neendlela zokugqoka imitshato yomtshato, leyo leyo, ukuba ingabancedi ukufihla ngokupheleleyo i-tummy ekhulisiweyo, kuya kululeka ngokucacileyo umzo wekamva elizayo.
Ugqoke umfazi okhulelweyo: izinto ezikhethiweyo
Kwiinyanga zokuqala emva kokukhulelwa, umfazi wesibini uhlala esincinci, kwaye imvu echazwe ingabonakali. Iinguqu ezincinci ngeli xesha zilungile ukuba zingabonakaliswa, kwaye akunzima ukuzifihla.
Ingubo kumfazi okhulelwe, osemncinci, unokuba yinto na. Into ephambili kukuba kufuneka ifanelane nohlobo lomzimba, kwaye ukhululeke.
Nangona ixesha elifutshane, kungcono ukushiya i-corsets eqinile, njengoko iphazamisa ukujikeleza kwegazi kwaye ingonakalisa impilo yemama kunye nomntwana. Ukuba umtshakazi sele sele echaze nangona isisu esingabalulekanga, kuyinqweneleka ukuphepha izitayela ezilungelelanisiweyo, umzekelo, umgca we-mermaid. Ngenxa yokuba intombazana ithenga ingubo kusengaphambili, kufuneka uqikelele ukuba kwithuba elincinane inani elinokutshintsha.
Umtshakazi, owathi wagqiba ukugqithisela umtshato, kufuneka abe ngumzekelo wokuhlambuluka nokuhlambuluka. Funda indlela yokukhetha iingubo ezifanelekileyo zomtshato ebandleni.
I sibini sithathu
Phakathi kokukhulelwa umama wexesha elizayo umama ufumana utshintsho olubonakalayo. Isibilini esisinyeneyo asilula ukufihla, ngoko kuyimfuneko ukhethe iindlela ezithile zokugqoka. Kule meko, ingubo egqithweni lwesiGrike ingaba yinto enhle kumfazi okhulelwe umtshato. Le nto izakufihla isisu esincinci kwaye iya kugxila kwiibele ezikhulayo. Amathissu aphantsi, awela phantsi, angagcini nje iimpawu zesimo somfazi okhulelweyo, kodwa uya kunceda uzive ukhululekile. Izambatho kwi-style yaseBukhosi ayinakuphazamisa ukunyakaza, umzimba uphefumula ngokukhululekile kuwo-ezi zizinzuzo ezilungileyo kumama wesikhathi esizayo.
Kunokwenzeka ukugxininisa amabele amahle anebhanti ebanzi eyenziwe ngezinto ezithambileyo. Njengomthetho, ugxininiso oluphambili lubekwe kwi-decoration yelo bhanti. Ibhande linakho ukuhlobiswa ngeempahla eziphathekayo, izibhinqa, iintyatyambo njalonjalo. Iimodeli ezikhangeleka kakuhle, apho le bhanti yenziwe ngendwangu eqhelekileyo.
Enye ifom efanelekileyo yomtshato yokubhinqa ngabafazi abakhulelwe ngu-A-silhouette. Uboya obuncinane kakhulu buya kuguqula umthambo kwaye ucacise ngempumelelo umlo wesifuba. Iengubo kule mpahla yanda ngokunyuka phantsi njenge-trapezoid. Ezi zitala zichaphazelekayo nangaliphi na ixesha-zenza umtshakazi abe ngumfazi kunye nobumnene.
Kodwa ukuba isisu somfazi okhulelweyo sele sele sibonakala sanele ngokufanelekileyo, unokwambatha ingubo kunye nokuxhamla okongezelelweyo kwisisu nangomlenze.
Kuyaziwa ukuba ngokufika kokukhulelwa, amantombazana amaninzi akhulisa amabele, ngoko ukugqoka imitshato yomtshato kwiindawo ezifanelekileyo kufuneka kube ne-neckline enhle. Ukugxininisa amabele amnandi, uya kuphazamisa ingqalelo kwiindawo ezithile zomzimba wakho.
Abafazi abathandekayo abafanelekanga izitayela kunye nemikhono eminwe, kunye nemihlobiso ngendlela yemigodi kunye neendonga ezinqeni nasesifuba. Ukuba ufuna ukugqoka ingubo ngemikhono, khetha iimodeli ezinamandla kwaye ezifanelekileyo ukuze izandla zakho zingabonakali zizele ngaphezu kwazo.
Iingubo zamaGrisi ziyifashane kunye nesitayela esidumile phakathi kwabatshatileyo banamhlanje. Ingubo enjalo iya kuhobisa intombazana encinci, inokusifihla isisu somtshakazi okhulelwe okanye sigxininise ubuchule obubalulekileyo bentombazana enomthwalo obunzima. Funda indlela iingubo zibukeka ngayo kwi-style style kunye nendlela yokukhetha umzekelo ofanelekileyo.
Kwakhona kwenzeka ukuba amantombazana anqumle ukudibanisa umtshato ngokomthetho, xa sele ekhulelwe ixesha lokukhulelwa. Kule meko, ukhetho lokugqoka lunqamle inani elincinci lemibala.
Abafazi abakhulu kunye nesisu esikhulu banokucebisa indlela yoBukumkani. Akakwazi ukufihla isikhundla sakho, kodwa ingubo leyo yenza ukuba uzive ukhululekile. Ukongeza, kule ngubo, oomama abazayo bajonge ngokuvisisanayo.
Enye imodeli ethandwayo yemigqobo yomtshato yabasetyhini abakhulelweyo, abakho kwimigangatho yokugqibela, ufana ne-A-silhouette. Ukuzalisekisa umfanekiso ongcono kunye nezixhobo eziyingqondi. Kuyinto enqwenelekayo ukushiya isigqubuthelo esinqabileyo, ezinkulu kunye neziqhumane ezikhanyayo. Esikhundleni sokugqithisa umthwalo ngomzobo weengubo, kungcono ukhethe iingubo ezivela kwindwangu enhle nexabisekileyo. Apha ungacinga ukuba ukhetho lomtshato lwe-lace lwabafazi abakhulelwe, umhlobiso we-silika, i-taffeta, i-satin.
Ukuba uzame kwiinketho ezininzi, kodwa isisu asihambelani kakuhle kuwo ngamnye, unokuzama ukuthenga ingubo yokutya, uze uyifake kumfanekiso wakho.
Yongeza umfanekiso kunye nezicathulo ezifanelekileyo. Kungcono ukhethe iiflethi ze-ballet ezintle kwiitoni zomhlobiso - imilenze kuyo ayiyi kudinwa yonke imihla. Abo abanqwenela ukugqoka izicathulo kwi-sol engezantsi kufuneka baqwalasele i-platform ephathekayo okanye izicathulo kwi-wedge. Umtshakazi ekukhulelwe kwexesha elide kungcono ukushiya izithende eziphezulu kunye neenwele ezincinci.
Umtshakazi egqoke isambatho esivela kwi-lace ukhangeleka ngokukhawuleza. I-Lace, njengezinye izinto ezingabonakaliyo, kunokudala ulula, kwaye ngexesha elifanayo, umfanekiso okhohlisa. Siza kukuxelela indlela yokukhetha iingubo ze-lace kwaye ujonge izinto ezintle kuyo.
Iimodeli zokugqoka umtshato kwabasetyhini abakhulelweyo: iingcebiso ezifanelekileyo
Ingubo yomfazi okhulelweyo ayifanele ibe yinde. Amantombazana ngethuba elifutshane, enomfanekiso omhle kunye nemilenze emide, imizekelo emfutshane iya kwenza. Baya kuguqula ingqalelo kwinquno kwaye bayithumele kwezinye iindawo zomzimba - umgca kunye nemilenze emihle. Ngoku kutshanje, iingubo ezimfutshane zokutshata zabafazi abakhulelweyo ziyaba ziwayo, kwaye kukho imimiselo eninzi kwiimononi.
Ngamanye amaxesha abafazi abathandayo banokuva iingcebiso malunga nokuba ingubo yomtshato ingathatyathwa yinto efanelekileyo. Ilungelo lokukhetha, ngokuqinisekileyo, lihlala le ntombazana, kodwa kuyafaneleka ukuba sicinge ukuba ufanele uzikhanyele ithuba lokujonga umtshato wakho njengendlovukazi? Ingubo yomtshato - into ehle kakhulu kunye nenhle kakhulu yeengubo ezifanelekileyo kwimeko enjalo.
Ukukhetha izesebe zokugqoka iimpahla zomtshato, ukulahla kweziqhamo zeziqulatho zombutho ojikelezayo, njengoko zibonakala ngokugqithiseleyo zigxininisa utshintsho kulo mfanekiso. Kwiintengiso zeentyatyambo uya kunikwa uninzi lwezinye izikhetho.
Isikhwama esiqhayisayo kwisambatho somtshato asiyona nto ingcono kakhulu kumfazi okhulelwe. Eli gama libukeka longeza ubunzima obongezelelweyo kumtshakazi, kwaye lenza ukuba lube lukhulu kunene. Kodwa izicubu ezikhanyayo, ukuba zingabonakali isisu, ziyakwazi ukwahlula kakuhle.
Ngomfanekiso womtshakazi okhulelweyo, kukulungele ukuvumelanisa ubucwebe obulula kunye obucokisekileyo - umtya omncinci weeparele zendalo okanye i-pendant encinane kwinqumfa elincinci. Gwema iintambo zeenyawo, iindandatho ezinkulu, amabhonceli amakhulu kunye nezinye izinto ezinkulu. Kuyafana nokugqoka - ukulahla amatye amakhulu kunye neeninzi zokuhlobisa.
Umbala wesigqoko somtshato kufuneka uthathwe kunye nobunzulu bonke. Khetha izambatho zeetoni eziyingqondi - i-classic white, ayvory, i-pastel shades yohlaza, i-blue, i-lilac iya kwenza. Ungakhethi izinto ezibonakalayo ezikhanyayo - iimpawu ezibonakalayo ziya kubonakala ngcono.
Iiglavu zomtshato zomtshakazi-nangona kungenjalo kunyanzelekile, kodwa kuyinto eqhelekileyo. Ukuze ungayonakalisi umfanekiso, kodwa ukugxininisa ukuphakama nokukhawuleza, phu laphula iingcebiso zethu malunga nokukhethwa kweiglavu zomtshato.
Sinqwenela umtshato ongalibalekiyo, kunye nosana oluzayo-impilo enhle!
Ukunethezeka kokukhula: ukhetha ingubo yomtshato kumama
Yintoni enxibayo ngomtshato womhlobo?
Ingubo yokutshata yomtshato: ukubonakaliswa kobubele obunzima
Iingubo zokugqoka iimvini zokutshata iimashumi amathathu
I-Pea puree kwi-multivark
Yintoni onokuyisela ukukhulelwa?
Kutheni amadoda edlala ngothando?
I-pie yamaGrike kunye noshizi yebhokhwe
Endaweni yebhokisi le-sandbox: imidlalo ye-TOP-3 yemfundo ngexesha lokuhamba
Ikhefu kwi-diapers ngokwakho-iminyathelo ngesinyathelo isinyathelo kunye nesithombe
Ukubhiyozela umtshato kwisangqa esincinci
Isiqhamo esihle sezilwanyana se-chinchilla
Ukusetyenziswa kweoli ye-petrograina ebalulekileyo
Indlela yokugqoka i ingwe emva kwe-30 kwaye ijonge kakuhle